မေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏! ဝိန်း Fort Worth, တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကနေ
မေးခွန်း မေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏! ဝိန်း Fort Worth, တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကနေ
2 နှစ်ပေါင်း2months ago #867 by sdatcher
ငါသည်ဤဖိုရမ်ကိုရှာဖွေစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ငါပျံသန်းခဲ့တော့ FSX နှစ်ပေါင်းရုံဝယ်ယူ P3D v4 ။ ကျွန်မတစ်ဦးဂျမ်ဘိုအကောင့် activated ပါတယ်ဒါကြောင့်အနည်းငယ်ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ ငါဖွင့်ဖို့ကို download ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုများရှိခြင်းတာပါ။ ဒေါင်းလုဒ်ဝင်းဒိုးကိုထင်ရှားပြီးမှဘာမှလုပ်နေစရာမလိုဘဲကွယ်ပျောက်တတ်၏။ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များနှင့်အတူ Windows ရဲ့ 10 ပြေးတယ်။
0.154 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်